Dhibaatooyin ma ku haystaa SEO? U fiirso 8-daan Qalab ee Ciqaabta Google | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Dhibaatooyin ma ku haystaa SEO? U fiirso 8-dan Aaladood ee Ciqaabta Google
Dhibaatooyin ma ku haystaa SEO? U fiirso 8-dan Aaladood ee Ciqaabta Google
Hagaajinta Matoorka Raadinta (SEO) waa mid ka mid ah waxyaabaha nolosha ee had iyo jeer loo yaqaan inay yar yihiin.
Isbeddel kasta oo cusub ee Google Algorithm wuxuu yimaadaa baahida loo qabo in la hagaajiyo oo la bilaabo ciyaarista xeer cusub.
Google had iyo jeer ma soo baxdo waa maxay xeerarkaas ayaa ah ama sida iyaga ayaad u hoggaansantaa.
Taas oo macnaheedu yahay in ay inta badan jirto dhibaato labaad oo ay tahay in aad tixgeliso - ciqaabta laga baqo ee Google.
Inkasta oo ay tahay wax kasta oo maamule SEO ah oo aqoon leh ay u badan tahay inuu ku riyoodo riyooyin, runtu waxay tahay in aanay ahayn inay noqoto cabsi haddii aad ogtahay waxa laga filayo oo aad tallaabo ku qaado.
Ku soo dhawoow hagahayaga isugaynta ah ee ku saabsan ganaaxyada Google oo ay ku jiraan waxa ay yihiin, sida aad u sheegi karto in lagu ganaaxay, iyo siddeeda aanu ugu jecelnahay Google penalty Checker Tools si ay kaaga caawiyaan hagaajinta dhibaatooyinkaaga SEO.
Waa maxay Ciqaabta Google iyo intee ayay jirtaa?
Ciqaabta Google ayaa si fudud u ah mashiinka raadinta habka uu u xannibo qaar ka mid ah mareegaha internetka ee ku hawlan xeeladaha ka soo horjeeda xeerarkooda ama aan buuxin shuruudaha qaarkood.
Inta lagu jiro marxaladda ciqaabta, mareegaha ayaa arki kara hoos u dhac weyn oo ah booska darajada ama shil toos ah oo taraafikada ah, dhammaan sababtoo ah Google hadda kuma muujinayo qiimeynta.
Ganacsiga hela taraafig qurux badan oo joogto ah guud ahaan, geeddi-socodku waxa uu gabi ahaanba wax u dhimayaa iibinta iyo jiilka rasaasta, waana sababta ay muhiim u tahay in la isku dayo in la iska ilaaliyo in mid la helo kharash kasta.
Badi suuq-geeyayaasha dhijitaalka ah ee ku hawlan kaliya xeeladaha koofiyadda cad waa inay waligood la tacaalin ciqaabta Google-ka.
Kaliya waa kuwa ka baxa koorsada oo ku lug yeesha waxyaabo ay ka mid yihiin jihooyin qarsoodi ah iyo sawirro huwan taasi runtii waxay leedahay sabab ay uga walwalaan.
➤ Liiska ganaaxyada la yaqaan, eeg annaga Koofiyad madow post.
Haddaba, ilaa intee ayay jirtaa ciqaabta Google-ka?
Haddii ay nasiib darro kugu filan tahay in lagugu dhufto, waxaad filan kartaa inay qaadato ilaa soddon maalmood xadgudub yar ama ka badan shay weyn.
Laakin ku tali: Ciqaabaha Google-ku wuu dhacaa iskood.
Waqtigaas, mareegahaaga ayaa la eegi doonaa si loo hubiyo in dhibaatadu ay saxantahay oo ganaaxa laga saaro. Haddii kale, waxaad wajihi kartaa mid kale.
Sideed Ku Ogaataa Hadii Mareegtaada Google Ganaaxayo?
Badanaa, tusaha kaliya ee aad heli doonto in mareegahaaga Google uu ganaaxay waa hoos u dhac lama filaan ah oo xad dhaaf ah oo gaadiidka ah.
Tani badanaa waa arrinta ugu horeysa ee la dareemi karo ee aad leedahay dhibaato - wayna mudan tahay in la eego.
Si kastaba ha ahaatee, taasi maaha jawaabta dhammaan-dhammaan ee sida aad ku ogaanayso in Google lagugu ganaaxay.
Suuqgeeyayaasha qaarkood xitaa ma ogaadaan in ay jirto arrin ilaa ay isticmaalaan qalabka wax lagu hubiyo ama lagu ogaaday barnaamijka falanqaynta ee ay jecel yihiin inay jirto digniin.
Si loo fahmo sida Google u soo saaro ganaaxyada, waxaa muhiim ah in la ogaado in inta badan lagu soo saaro qaab gacanta ah.
Tani waxay ka dhigan tahay in shabakad gaar ah loo calaamadeeyay arrin ka dibna kormeeraha aadanaha ayaa dib u eegaya arrinta si loo go'aamiyo haddii ay dhab ahaantii dhibaato jirto.
Haddaba, labadan tallaabo ee loo maro dhulka taraafikada ee luntay badanaa waa wax dhaca waqti ka dib.
Haddii aad hadda uun simbirtay oo aad samaysay khalad yar, laakiin aad isla markiiba saxday, waa inaadan yeelan arrin ganaax ah.
Waa maxay Farqiga u dhexeeya Beddelka Algorithm iyo Ganaax?
Waxaa muhiim ah in la fahmo in ay jirto farqi cad oo u dhexeeya isbeddelka algorithm Google ee caalamiga ah iyo ciqaabta.
Isbeddel algorithm (sida BERT) waa wax saameeya dhammaan mareegaha, ma aha wax yar oo la doortay.
Isbeddellada algorithm waxaa loogu talagalay in tayada raadinta ay u fiicnaato isticmaalaha ugu dambeeya, kaas oo mararka qaarkood ku abuura hoos u dhac ku yimaada taraafikada waxyaabaha qaarkood.
Ciqaabtu waa waxa ay u egtahay - ciqaab ku lug yeelashada hawlo gaar ah kuwaas oo ka soo horjeeda buug-ciyaareedka xeerarka Google.
Ka fakar in ay tahay wakhti ka baxsan helitaanka taraafig sababtoo ah wax aad ku samaysay mareegahaaga, si ula kac ah ama ula kac ah.
Mar labaad, ganaaxyada waxaa badanaa lagu soo saaraa gacanta, taas oo macnaheedu yahay in website-kaagu uu lahaan lahaa arrinku muddo dheer.
Si kale oo lagu sheegi karo inaad leedahay rigoore?
Isbeddellada algorithm aad ayaa loo dacaayadeeyaa. Baadhitaan degdeg ah oo lagu sameeyo intarneedka ayaa kuu sheegi doonta haddii ay jirtay cusboonaysiinta Google-ka ee dhawaantan, oo u muuqata inay dhacdo dhawrkii biloodba mar.
Haddii aysan jirin caymis ku saabsan dhacdadan oo kale, markaa waxaa laga yaabaa inay caqli gal tahay inaad bilowdo inaad eegto haddii aad dhab ahaantii ciqaab ku leedahay boggaaga.
8 Qalabka Hubinta Ciqaabta Google si ay u caawiyaan SEO-gaaga
Markay timaaddo wax ka qabashada ganaaxyada Google, haysashada qalab hubineed wanaagsan ayaa runtii muhiim ah.
Ka dib oo dhan, mashiinka raadinta si sax ah kuuguma soo diro warqad ay ku qoran yihiin dhammaan xadgudubyadaada qaab gabay ah.
Taa baddalkeeda, qalab dhinac saddexaad oo wanaagsan ayaa inta badan ah habka kaliya ee aad u malaynayso inay jirto arrin.
Waa kuwan siddeed ka mid ah aaladaha hubinta ciqaabta Google ee ugu jecel si loo arko haddii ay dhibaato ka jirto taraafikada degelkaaga.
Waxaa jirta sabab sababta SEMRush loogu tixgeliyo mid ka mid ah aaladaha SEO ee saxda ah ee suuqgeynta dhijitaalka ah.
Ma aha oo kaliya in madalkoodu uu yahay mid si cajiib ah u adag, laakiin waxay bixisaa astaamo aad u badan si ay uga caawiyaan maamulayaasha shabakadaha inay fahmaan halka iyo sida bogaggoodu u kala sarreeyaan.
Gaar ahaan, Sensorkooda SEMRush wuxuu u shaqeeyaa inuu eego dhammaan bogaggaaga iyo ereyada muhiimka ah si loo go'aamiyo meelaha aad ka arki karto isbedel.
Ka dib markaad mareegahaaga ku socodsiiso barnaamijka, waa inaad awood u yeelatid inaad go'aamiso haddii ay jirto suurtogalnimo ganaax iyo meesha aad rabto inaad wax ka qabato.
Mar labaad, waxay yihiin mid ka mid ah qalabka SEO ee ugu fiican suuqa.
Jeegaha ciqaabtu runtii waa uun gunno, markaa waxa ugu yaraan mudan in la eego adeegyadooda oo dhan si aad u aragto isbeddello kale oo ay tahay in aad ku samayso istaraatiijiyada ereyga muhiimka ah iyo guud ahaan qorshaha suuq-geynta nuxurka.
Haddii aad raadinayso habka ugu fudud uguna tooska ah si aad u hubiso ganaaxyada Google, markaa waxaad u baahan doontaa inaad eegto qalabka Panguin.
Barnaamijkan waxa loogu talagalay oo keliya ujeeddo keliya, taas oo macnaheedu yahay inaadan ku mashquulin walxaha kale ama xogta.
Qalabku wuxuu si aan kala go 'lahayn ula shaqeeyaa akoonkaaga Google Analytics ee jira si uu u daboosho taraafikadaada dabiiciga ah labadii sano ee la soo dhaafay oo uu ku daro waqti go'an markii uu jiray isbeddel algorithm.
Haddi aad aragto diif weyn oo aag ah oo aan la xidhiidhin casriyeyn weyn, waxaa jirta fursad wanaagsan tan waxaa ugu wacnaa rigoore gacanta ah.
Mid ka mid ah sababaha ay maareeyayaasha SEO badan u jecel yihiin qalabkan ciqaabta ayaa ah in ay tahay mid aad u fudud, laakiin taasi sidoo kale waa dhinaca hoose.
Dips-yadu had iyo jeer ma aha kuwo tilmaamaya ganaaxa, sida nuxurka xilliyeedka oo arki kara hoos u dhac bilaha fasaxa ah.
Si kastaba ha noqotee, waa ikhtiyaar weyn haddii aad raadineyso aragti aasaasi ah oo ku saabsan halka uu taagan yahay mareegahaaga.
Dadka ku nool Moz ayaa si weyn loogu yaqaanaa inay yihiin wax yar oo caqli-gal ah iyo samaynta waxyaabo qalalan sida algorithm wax yar oo xiiso leh.
Marka ay timaado boggooda Mozcast, dulucdu waa qaadashada saadaasha cimilada dhaqameed ee laga yaabo inaad ku aragto wararka deegaankaaga.
Qalabku ma muujinayo haddii lagu ganaaxay, laakiin waxay kaa caawin kartaa inaad ogaato isbeddelada aan la xaqiijin ee Google algorithm.
Maalin leh cimilo 98-degree ah oo ku taal MozCast, tusaale ahaan, waxay si sax ah u muujin kartaa taas.
Markaa, haddii aad dareentay hoos u dhac lama filaan ah oo ku yimid taraafikadaada oo ay jirto cimilo aad u wanaagsan oo wanaagsan MozCast, waxaa laga yaabaa in waa ciqaab Google ah.
4. Rank Rank
Kuwa ay ku dhibtoonayaan macluumaadka falanqaynta badan, helitaanka qalab sida Rank Ranger waa fikrad wanaagsan.
Qalabkan fudud ee aadka u fudud ayaa fududeynaya in la arko haddii aad halis ugu jirto dhibaatooyin, iyadoo ay ugu wacan tahay isbeddellada algoorithm ama ganaaxyo.
Nidaamka midabaysan wuxuu ka bilaabmaa buluug ilaa casaan, isagoo siinaya tilmaame cad oo ah haddii aad ku jirto cad ama haddii ay tahay inaad ka welwelsan tahay.
Dhibaatada kaliya? Dhab ahaantii si toos ah uma kala soocayo inay tahay arrin gaar ah oo ku saabsan mareegahaaga.
Dhinacaas, waa inaad mar kale hubisaa cimilada waxa ka socda SEO si aad u aragto haddii aad u baahan tahay inaad isbeddel weyn ku sameyso boggaaga.
Warka wanaagsan? Kaliya waxaad u baahan doontaa inaad bilowdo walwal haddii aad aragto maalin casaan ah, maadaama ay taasi noqon doonto waqtiga kaliya ee ay jirto halista goobtaada oo leh arrin taraafikada.
Qalabku sidoo kale waa bilaash, taas oo ka dhigaysa tillaabada ugu horreysa ee wanaagsan haddii aad isku dayayso inaad ogaato sababta taraafikadaadu si lama filaan ah u quustay oo aadan weli u baahnayn macluumaad qoto dheer.
5. Raadinta Raadinta Google
Dabcan, waa inaad eegtaa isha si aad runtii u aragto haddii ay dhibaato ka jirto boggaaga oo aad ku jirto ciqaabta rasmiga ah ee Google.
Tani waa halka lagugu soo wargelin doono haddii aad heshay ciqaab gacanta ah oo qaadi kara tillaabo uu ku codsanayo in mid laga saaro ka dib marka aad isbedel sameyso.
Dhab ahaantii, tani badanaa waa mid ka mid ah meelaha ugu horreeya ee ay tahay inaad hubiso haddii aad aragto inuu jiro hoos u dhac weyn oo ku yimid taraafikada Google Analytics.
Search Console waxa kale oo ay bixisaa isku xidhka tiro aad u qoto dheer oo qurux badan oo ah agabka dhaqanka ugu fiican, taas oo ka dhigaysa meel fiican oo lagu raadiyo habab lagu xaliyo dhibaatada haddii lagugu xukumo.
6. AccuRanker Grump
Si aad u hesho madadaalo ku saabsan wax ka qabashada ganaaxyada Google, waxaa jira AccuRanker Grump.
Shabeel sawir gacmeedka yar ee xiisaha leh waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo maamulayaasha shabakadaha inay arkaan aragti ballaaran oo ku saabsan cimilada guud ee Google maalin kasta.
Shabeelka guracan, ayaa sii weynaan doona isbedbeddelka qiimeynta.
In kasta oo qalabkani aanu ahayn mid gaar u ah hal degel, haddana waxa ay eegtaa kumanaan erey-bixineed oo la kala soocay maalin kasta si loo arko sida ugu wanaagsan ee boqolka natiijooyin ee ugu sarreeya ay u socdaan.
Isbeddellada waaweyni waxay ka dhigan yihiin isbeddello badan, taas oo ka dhigaysa bisadda qaaliga ah ee kitty inay rabto inay qayliso.
Turjumaada? Ha ku khaldamin shabeel guracan. Haddii aad la kulmeyso qulqulka taraafik maalin uusan ku faraxsanayn, markaas waxay u badan tahay Google guud ahaan.
Haddii uu faraxsan yahay? Waa hagaag, wakhti aad ku qaadato shakhsi ahaan oo aad bilowdo raadinta ciqaab suurtagal ah meel ka mid ah boggaaga.
Marka ay timaado falanqaynta bogga internetka, FE International way taqaanaa alaabtooda.
Sida mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee iibka iyo dullaalnimada ee caalamiga ah, waxay inta badan eegaan taraafikada muddada-dheer sida tilmaame qiimaha guud ee mareegaha iibka u socda.
Taasi waxay tidhi, kaliya waxay macno samaynaysaa inay la imaan doonaan qalab bilaash ah si ay uga caawiyaan milkiilayaasha websaydhada inay go'aamiyaan sababta ay u arkayaan dhibco gaar ah oo taraafig ah.
Si la mid ah dhowr ka mid ah xulashooyinka kale ee liiskan, looma baahna in la galo ama la saxiixdo si loo arko xogta.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad geliso ciwaanka degelkaaga waxaadna arki doontaa jaantus leh xogta taraafig ee taariikhiga ah.
Laga soo bilaabo halkaas, waxaad barbar dhigi kartaa kororka gaarka ah iyo hoos u dhaca taraafikada iyo isbeddelada algorithm Google midabka leh.
Laakiin qaybta ka dhigaysa qalabkan mid gaar ah ayaa ah inaad haysato ikhtiyaarka aad u dhoofin karto xogta si dib loogu eego.
Marka la soo koobo, tani waxay sahlaysaa in la garto arrin ka dibna u soo jiid dareenka kooxdaada suuqgeyneed hadhow.
Ugu dambeyntii, waxaa jira Qalabka Hubiyaha Ciqaabta Google ee Fruition.
Loo tixgeliyey ikhtiyaarka freemium, barnaamijku wuxuu isticmaalaa algorithms-yada gaarka ah si uu u eego mareegaha xogtii taraafikada ee hore oo loo go'aamiyo haddii ay jirtay ciqaab run ah oo Google ah iyo in kale.
Isticmaalayaasha barnaamijkan waxay ku soo celiyeen natiijooyin isku dhafan, markaa xusuusnow in masaafadaadu ay kala duwanaan karto.
Si kastaba ha ahaatee, waxay runtii noqon kartaa tilmaame wanaagsan oo arrin ah Haddii aad isticmaashay qaar ka mid ah fursadaha xorta ah ee liiskan ku jira oo aanad weli sawir cad ka haysan in ay dhab ahaantii dhibaato jirto.
Maxaan Samayn Karaa Hadii Laygu Ganaaxo?
Aynu nidhaahno hal daqiiqo inaad isticmaashay qayb ama qaar badan oo ka mid ah sideeda qalab ee aanu liiskan ku soo darnay oo aad go'aamisay in uu jiro ganaax boggaaga.
Maxay tahay tallaabada xigta ee lagu hagaajinayo?
Talaabada koowaad: Go'aami meesha ay arintu ka taagan tahay
Caadiyan, Google Search Console ayaa ku siin doonta tilmaame waxa lagugu ciqaabayo, laakiin tani mar walba xaaladdu maaha.
Mararka qaarkood waxay u sababeynayaan waa wax yar oo mugdi ah marka ugu fiican.
Xaaladdaas, waxaa laga yaabaa inaad dib u eegto liiska xadgudubyada ugu badan oo aad go'aansato meelaha isbeddellada loo baahan yahay.
Tallaabada labaad: Samee dhammaan isbeddellada ku habboon
Inta badan, waxaa laga yaabaa inaad ku sameyso dhowr isbedel oo degdeg ah mareegahaaga si aad u yareyso arrinta.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad si joogto ah uga qaybqaadato hawlaha laga yaabo inay ku jiraan cidhifka ay Google aqbali karto, sii wad oo hagaaji inta aad awooddo.
Ka dib oo dhan, ma rabto in ay kuu calaamadiyaan wax kale marka ay sameeyaan dib u eegis mustaqbalka, kaas oo si dhab ah u khatar galin kara gaadiidkaaga in ka badan oo kaliya ciqaabta hore.
Tallaabada saddexaad: Codso dib-u-qiimeyn si aad uga saarto ciqaabta
Adigoo isticmaalaya Google Search Console, codso in lagaa saaro ciqaabta.
Nasiib darrose, ma jiro waqti sax ah oo ku saabsan inta ay tani qaadan karto.
Runtii waxay ku xidhan tahay dib u dhacooda iyo haddii ay jirtay algorithm dhawaan la cusboonaysiiyay.
Qaar ka mid ah maamulayaasha mareegaha ayaa soo sheegaya in arrinta lagu xalinayo maalmo yar gudaheed, halka qaar kalena ay tilmaameen inay qaadaneyso dhowr toddobaad.
Talaabada afraad: Iska hubi inaadan ku celin khaladaadkaga
Marka lagu nadiifiyo, waa muhiim inaad qaado tillaabooyin aad ku hubinayso inaadan markale helin ciqaab mustaqbalka.
Markaad mar walba raacdo dhaqamada ugu wanaagsan ee Google marka ay timaado hagaajinta mashiinka raadinta, waxaad ka hortagi kartaa hoos u dhaca taraafikada inay mustaqbalka dhacaan.
Waxaa dheer, xitaa waxaad arki kartaa kor u kaca gaadiidka haddii aad samaynayso dhammaan xulashooyinka saxda ah marka ay timaado sida aad u wanaajiso boggaga.
Guul dheeraad ah, sax?
Isku soo wada duuboo: Had iyo jeer ku diyaargarow Qalabka Hubinta Ciqaabta Google
La kulma ciqaabta Google xaqiiqdii waxay noqon kartaa cabsi haddii aanad hubin sababta aad u arkayso hoos u dhaca taraafik ee taraafikada.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in sideedan aaladaha Google Penalty Checker waa hab wanaagsan oo lagu sheegi karo haddii ay jirto arrin ama waxa aad arkayso waa uun hoos u dhac ku yimid taraafikada webka sababtoo ah isbeddelka algorithm.
Weli waxaad la yaaban tahay sida qiimeeyayaasha tayada Google ay ula yimaadaan sida ugu wanagsan ee mareegaha ugu habboon yahay tilmaamahooda ama haddii loo baahan yahay in ganaax la soo saaro?
Hubi bartayada blog-ga sida Google ayaa si sax ah u qiimeeya goobtaada!
Waa maxay SSD? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Kaydinta Gobolka Adag
Waa kuwan qaar ka mid ah Talooyin aad uga fogaan karto Google URL liiska madow